Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > top 5 Inta badan Safarada Tareen Romantic In Europe
Haddii aad ku soo guursatay for sano, ama aad weli ku jira marxaladaha hore ee xiriir, lamaane kasta waxay ka faa'iideysan karaan waqtiga tayada leh ee isla qaatay. Waa gaar ahaan u fiican in ay sameeyaan dadaal ah Maalinta Jacaylka. Ku safrid tareen waa habka ugu fiican si ay u bilaabaan jaceyl ah iyo cararaan Malabka iyadoo qofka aad jeceshahay. Dedejiyo aamusnaan marayo baadiyaha ama buuraha badan. Laylan ee soo jiidasho badan ee la soo dhaafay, magaalooyinka qadiimiga ah ama ku teedsan xeebaha glacial a gudubno. Halkan waxa ku jira top 5 ugu jireen sodcaalladoodii oo tareen ka taataabtay ee Europe. Kastaa wuxu bixiyaa wax gaar ah Maalinta Jacaylka.
London si ay u Venice waa First Romantic Tareen Safarada
Tani safarka tareenka aad iyo soo celin doonaa qofka aad jeceshahay dhex xaqse ah baadiyaha. Markaas waxaad rogo doonaa buuraha cajiib ah Switzerland ee la soo dhaafay iyo Austria. Next, Waxaad ku arki doontaa muuqaalka ugu quruxda badan ee Verona ee tareenka Talyaaniga ka hor intaadan ugu dambeyntii soo gaarin bangiyo Bankiyeedka weyn ee Venetian Grand Canal.
Ka hadalka tareenka dhex France doonaa inaad qaaday midabka caanka ah iyo iftiin ee dalka. Laga soo bilaabo beeraha lavender guduudan Cote d'Casuur biyaha buluug. Yaabsan sida ay qoraxda oo dahabka layaab leh oo dhan immerses, aad ku jirtid, waayo dawayn. Laga bilaabo magaalada ugu jacaylka oo dhan, Paris, safarkaaga rail waa idlaan doonaan xeebaha dreamy ee xeebaha riwaayado. Sidoo kale waad sameyn doontaa fiiri tuulooyinka sawirada leh iyo gabbaldayaha iyo beeraha lavender of Provence.
Florence si Rome, Italy
Adiga iyo qof aad jeceshahay safri kartaa tareen oo u dhexeeya laba magaalo cajiib ah sida u muuqanayo weyn baadiyaha Talyaani ee la soo dhaafay aad suuqa kala qaadee. Tani waa mid ka mid ah u socdaalay ugu tareen taataabtay ee Europe.
Qaybtan yar ee tareenka u adeegta shan Talyaani ah tuulooyinka Faransiiska oo ka mid ah Cinque Terre in fashion riwaayado. safarka tareenka waa in ka yar saacad kasta jidka, sidaas tareenka hal hab. Markaas waxaad ku Bixisaan kartaa maalin tug aawgeed tuulada-xira cajiib ah dib ugu soo meesha aad bilowday. Tani safarka tareenka waa run ahaantii cajiib ah la views of Sea Ligurian ah, tuulooyinka pastel, canab ah saf iyo sidoo kale beeraha firfircoon.
Ku bilow adiga oo safar tareen taataabtay ee Zurich. Booqo Bahnhofstrasse, mid ka mid ah ugu jidadka shopping soo jiidasho leh dunida oo dhan, iyo iibsadaan oo kubadii a. Yaabsan shuqullada xusid mudan of Van Gogh oo Monet at the art badan-jeclaa Kunsthaus gallery. Waxaa jira waxyaabo badan oo lamaanayaasha ay ku sameeyaan magaalada Zurich ka hor inta aysan u nuuxnuuxsan muuqaalka tareen kortaan si Innsbruck. Socda weheliyaan bangiyada ee Lake Zurich dhinaca cajiib ah Alpine muuqaal. Waxaad sidoo kale u gudbin doonaa seeraha buurta qurux badan iyo Vistas yaab leh iyada oo loo marayo. Maxay noqon karaan waxa ka badan taataabtay?
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#hindiga London taataabtay romanticdestinations travelflorence travelnice travelparis travelrome travelvenice